Ny lahatsoratr'i Mike Cunsolo momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mike Cunsolo
Efa teo daholo isika rehetra sa tsy izany. Miasa mafy amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny varotra ataon'ny mpanjifanao, manao ora adaladala sy asa maro toa ny tsara indrindra amin'izy ireo. Miezaha manao izay tsara indrindra vitanao mba hahazoana antoka fa efa milamina ny zava-drehetra, mba hizotra araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra rehefa miaina ianao. Azo antoka fa teo aho ary tsy nahalala ny ora maro nandaniako nihazakazaka toy ny adala. Fa ny fientanam-po dia ampahany lehibe amin'ny antony mahatonga anao